Nicolas Dupuis sy ny Barea Ho tonga amin’ny tsotsorimamba isarahana…
Adihevitra hatramin’izao ny raharaha Nicolas Dupuis teo anatrehan’ny tsy fahombiazan’ny Barean’i Madagasikara,
ka tsy nahatafakarana any amin’ny dingana famaranan’ny CAN 2022 any Kameronina. Naresaka tao anatin’ny 72ora ny hoe : « Tsy hanaiky ny hijanonan'i Nicolas Dupuis ho Mpanazatra intsony ny mpitantana Federasion’ny Baolina kitra na ny FMF, fa tsy maintsy hiroso amin'ny fanesorana sy fanoloana an'i Nicolas Dupuis sy ny Staff Barea rehetra », izay tsy mbola misy aloha ny fanambarana ofisialy momba io, saingy ho avy tsy ho ela, araka ny loharanom-baovao avy etsy amin’ny FMF Isoraka. Voalaza fa noho ny tsy nahatafakarana CAN 2022, ny fampidirana Staff izay tsy nankatoavin'ny FMF, ary ny fidirana amin'ny fanafarana « équipement » tsy nahazo alalana tamin'ny FMF no antony hanesorana azy. Mbola misy 2 taona sy tapany ny soniam-pifanarahana teo amin'ny FMF sy Dupuis hatramin’ny 2023, ka tsy maintsy hisy ny fifampiresahana hisian’ny fisarahana tsy misy maratra, raha ny loharanom-baovao. Hanafatra Mpanazatra vaovao ny FMF mialohan’ny fifanintsanan’ny « Mondial 2022 » ny FMF, ary hiova daholo ny Staff Barea rehetra, hoy ny vaovao mbola tsy ofisialy. Ilay Frantsay Lionel Soccoia nitantana ny Coton Sport Camerounais teo aloha, ary mitondra ny Kano Sport Pillar FC D1 any Nigéria sy ilay Mpilalaon’ny PSG fahiny Eric Rabesandratana no isan’ny anarana mandehandeha mety hasolo an’i Dupuis. Isan’ny nahazoany kiana maro ny fisahanana andraikitra maro ankoatra ny maha mpanazatra, dia ny nametrahana azy ho Tale Teknika Nasionaly (DTN), Ambasadaoron’ny CNaPS,… ahiana niteraka fihenan-danja tamin’ny fiantsorohana ny asa maha mpanazatra. Afaka roa volana katroka eo isika dia hiatrika ny fifanintsanan’ny “Mondial 2022” ny Barea. Tena azo antoka fa hahazoana vokatra ve ny fanoloana mpanazatra ao anatin’izany? Manahirana ity raharaha ity, ka andrasana ny tohiny.
« Am-pahitsiana, mihevitra aho fa tena niasa tsara izy, mihevitra aho fa tena mahay izy satria afaka nahatakatra ny mikasika ny Malagasy, nahomby. Fa nahoana kosa no nisy ireny fahombiazana farany teo ireny ? Amiko, lasa Malagasy Atoa Dupuis tamin’ny fitondran-tenany, nahazo volon-tany vetivety, hany ka nanaiky ny hilalao ao anatin’ny lalao “werawera” », hoy kosa ny mpanao politika iray.
Baolina kitra Malagasy Mitohy ny endrika famotehana samihafa
Nanomboka tany amin’ny tsy fahatomombanan’ny fanomanan’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra na ny Barea ny fiadiana ny tapakilan’ny amboara eran-tany atao any Qatar amin’ny taona 2022 ny raharaha.
Amboaran’ny kaonfederasionina 2021 Resy an-tanàna 3 noho 0 ny CFFA
Hita ho adin’ny samy tekinisianina ihany ny fihaonana teo amin’ny CFFA avy etsy Andoharanofotsy sy ny Grupo Desportivo Interclube avy atsy Angola nandritry ny lalao mandroso teo amin’ny